Kordhinta Mars. Odyssey-kii weynaa ee Injineerinka Qorshaynta | Saadaasha Shabakadda
Ilbaxnimada mala-awaalka ah ka dib markii la qaabeeyey
Ereyga "terraforming" waa fikradda tilmaamaysa ficilada beddelidda meeraha si looga dhigo meel lagu noolaado. Dejinta Mars waxay si sax ah u tahay, habka injineernimada meeraha ee gacan ka geysan doonta wax ka beddelka cimilada guud ee meeraha. Nidaamkani wuxuu ujeedkiisu ahaa inuu kordhiyo heerkulka meeraha qabow iyo qaboojinta. Sidoo kale in la abuuro jawi cufan, in fikrad lagaa siiyo, waa 1% waxa aan halkaan ku hayno, taas oo ah, waxaan dhihi karnaa inay adag tahay inay wax leedahay. Dabcan, abuur wabiyaal, oo lahaa oksijiin, inay jiraan dhir, geedo, fauna ... wadar ahaan, taasi waxay ahayd waxa ugu dhow Dunida.
Seynisyahanno badan (iyo qaar aragti dheer) waxay bixiyeen talo soo jeedin ku saabsan sida lagu gaaro howshan. Waxay u muuqan kartaa wax fudud, laakiin haddii aad si sax ah u sababayso, ma sahlana sidaas. Natiijooyinka ugu dambeeya ee la helay, sida aagagga waaweyn ee barafka iyo suurtagalnimada in biyuhu iyaga ku hoos jiraan, ay si weyn u hurisay ruuxi inay meeraystaan ​​meeraha. Waxaa qoray NASA, iyo shirkado badan, waxay horey u sameeyeen soo jeedin ku saabsan astaanta dadka aadaya halkaas si ay u bilaabaan hawshan hanka leh. Safar hal dhinac ah, laakiin aan ahayn soo noqosho, oo aan bilaabi karno inaan aragno tobanka sano ee soo socota. Si kastaba ha noqotee, dib-u-habeynta meeraha ma ahan hawl fudud, waana marka la isku dayayo in wax laga beddelo, waxyaabo la helay halka khuburo badan oo ka mid ah soo-jeedintooda aan markii horeba tixgelin siin.
1 Abuur cimilada iyo jawiga Mars
2 Habka loo helo biyo
3 Nidaamka lagu helo oksijiin
Abuur cimilada iyo jawiga Mars
Sawirka Mars ee hawada sare
Biyaha kuma jiri karaan xaalad dareere ah. Waqtigan xaadirka ah Mars waa meere leh heer cadaadis cimilo aad u liidata, iyadoo la raacayo isku xigxiga 0,005, iyadoo tixraaceysa Dunida, 1. Sidoo kale waa inaan tirino heerkulka, Dunida qiyaastii 15ºC, Mars, inkasta oo aysan jirin diiwaanno tiro badan oo ku filan oo lagu ogaanayo saxsanaanta saxda ah, waxaan dhihi karnaa waxay u dhaxeysaa -40 / -70ºC. Waxaa jira diiwaanno aad u isbeddel badan, sida farqiga u dhexeeya ugu badnaan iyo ugu yar ee ay ogaadaan baaritaanka Viking, kan ugu diirran -13ºC iyo qabowga yahay -89ºC. Labada diiwaangelinba waa ka badnaan karaan farqi aad u sarreeya iyadoo kuxiran barta barta meeraha laga cabirayo.
Si loo helo biyo, kuma filnaan karto kaliya in la kordhiyo heerkulkaMaaddaama ay leedahay cadaadis sidaas u hooseeya, waxay ku jiri kartaa oo keliya xaalad gaas ama xaalad adag. Waayo, waa inaan ku kordhinaa cadaadiska kor ku xusan 0,006. Iyada oo leh cadaadis hawo sare oo ku filan iyo heer kulka meeraha, mid ka mid ah tiirarka aasaasiga ah ee 'Terraforming' ayaa la xallin lahaa. Laakiin ... Sidee loo helaa cadaadis iyo heer kulka si loo kordhiyo?
Habka loo helo biyo
Jaantuska wajiga biyaha
Waan ognahay taas waxaan u baahanahay inaan kordhino cadaadiska, kordhino heerkulka, iyo waxaas oo dhan si aan sidoo kale biyo u gaarno. Mid ka mid ah hababka ugu xiisaha badan ee wax walba lagu dhammaystiro waa iyadoo la duqeeyo tiirarka. Iyaga oo duqeynaya, barafka ayaa kordhin kara darajooyinka, qayb ka mid ah CO2 ayaa hoos u dhigi doonta. Sublimate-ka macnaheedu waa ka sii gudubida gunta hawada. Tani waxay sababi doontaa kororka CO2 ee jawiga, taas oo kordhin karta cadaadiska cimilada ilaa 0,3. Sida aad ku arki karto sawirka, Mars waxay ku taal barta A. Waxa loogu yeero seddex geesood, B, waa aagga aan ka bilaabi karno inaan biyo ka helno. Barta 'C' ayaa noqon doonta barta aan ku imaan lahayn.
Mid ka mid ah qaababka la doonayo in lagu duqeeyo ayaa sidoo kale ka yimid afka Ellon Musk, oo caan ku ah inuu yahay milkiilaha dhowr shirkadood, oo ay ku jiraan caanka ah Tesla ama Space-X. Ellon misk la soo jeediyay in yar ka hor, in lagu qarxiyo bambooyinka nukliyeerka. Fikrad macquul ah, laakiin mid daba socota waxyaabaha soo socda. Dareenka silsiladda ee la eryanayo ka dib markii lagu sii daayo CO2 qaabka gaaska ayaa ah in cadaadiska uu kordho, taas oo kordhisa heerkulka, taas oo kordhisa sii deynta CO2 badan, taas oo keeneysa in cadaadiska uu mar kale kordho, iwm. jidka, waxaan heli lahayn habka jawaab celinta wanaagsan.
Nidaamka lagu helo oksijiin
Marka barafka loo beddelo biyo, waxaan lahaan doonnaa jawi ka kooban inta badan kaarboon laba ogsaydhka iyo uumiga biyaha, laakiin weli oksijiin la'aan. Fikradda halkan waxay noqoneysaa in phytoplankton laga qaado dhulka. Phytoplankton waxay dhulkeena siisaa in kabadan 50% oksijiinka aan neefsanno. Waxaan sidan ku abuuri karnaa oksijiin, oo waxaan ku guuleysan karnaa jawi aad u neefsan kara.
Nidaamkan bilowga ah oo dhan wuxuu qaadan doonaa sannado badan. Sidii aan awoodnay inaan u xaqiijino, waxaan tagi karnaa Terraform Mars. Aadanaha ugu horeeya ee ay NASA qorsheyneyso inay dirto waxaa laga filayaa sanadka markuu yahay 2030. Waa in la sheegaa in shirkadaha qaar ay leeyihiin hamiga ah inay noqdaan tobanka sano ee soo socota. Qaar ka mid ah, sida SPACE-X, waxay bilaabayaan inay soo bandhigaan tusaalooyin ku saabsan sida safaradahan looga dhigo kuwo dhaqaale iyo hufnaan leh.
Sawirro | i.ytimg.com, nasa.gov, stefaniabertoldo.com, pulpenfantasi.blogspot.com.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » The Terraforming ee Mars